काठमाडौंमा प्रेमीले प्रेमिकालाई पहिले ना’ङ्गो बनाएर सुताए त्यसपछि पब्जी खेलेकै स्टाइलमा च’क्कु रोपेर गरिदिए ह’त्या र आफुले पनि गरे आ’त्महत्या ! – Tufan Media News
काठमाडौंमा प्रेमीले प्रेमिकालाई पहिले ना’ङ्गो बनाएर सुताए त्यसपछि पब्जी खेलेकै स्टाइलमा च’क्कु रोपेर गरिदिए ह’त्या र आफुले पनि गरे आ’त्महत्या !
२३ पुष २०७८, शुक्रबार १३:२४
काठमाडाैंमा दुई युवायुवती मृ’त फेला परेका छन् । बौद्धको फैकास्थित राधाकृष्ण मन्दिर नजिकसँगै बस्दै आएका खोटाङको साकेला गाउँपालिका-२ रतन्तछाकी २२ वर्षीय युसुना राई र संखुवासभाका २५ वर्षीय अनिश जिमी मृ’त फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार काठमाडौंको कपनस्थित राधाकृष्ण मन्दिर नजिकको घरमा २५ वर्षीय अनिस राईले प्रेमीका युसुना राईको ह’ ‘त्या गरी देहत्याग गरेका छन्। राती २ बजे प्रहरी पुग्दा युवती मृ’त अवस्था र युवक निकै अन्तिम अवस्थामा फेला परेका थिए।
आमाले बोलाउँदा उनीहरूले ढोका खोलेका थिएनन्। ढोका नखोलेपछि बहिनीको छोरालाई बोलाएर ढोका फो’ड्न’ लगाएका थिए। कोठाभित्र हेर्दा युसिना बेडमा मृ’त अवस्थामा फेला परेकी थिइन्।
‘घटना हेर्दा युवकले प्रेमीकाको शरिरभरी च’ -क्कु हा’ने’का छन्। शरिरभरी निकै चो’टस’हि’त युवती मृ’त अवस्थामा कोठामा फेला परेकी थिइन्। छेउमै ढ’ले’का थिए युवक। उनको घाटीमा च’क्कु’ले रो’पे’को चो’ ‘ट छ। युवती न -ग्न अवस्थामा थिइन् भने युवक अ’र्ध’न’ ग्न। आपसी झ’ग’डा हुँदा आ’वे’समा आई युवकले ह’ ‘त्या ग’रे’को जस्तो देखिन्छ।’
यद्यपी यसको पुष्ट्याइ पो’ष्टमार्टम रिपोर्टले गर्ने एक प्रहरीले बताए। प्रहरीले शवको पो’ष्टमा’र्टम गर्न शिक्षण अस्पताल लैजाने तयारी गरेको छ। घट’नाबारे थप अनुसन्धान हुँदैछ।
दु’र्घटनामा जीप चालकको मृ’त्यु
नोरा फतेहीलाई कोरोना संक्रमण